चीन थोक चमक पानी सक्रिय मैजिक चिपकने Eyeliner निजी लेबल बक्सेहरु कारखाना र निर्माता संग Weiti
निजी लेबल बक्सहरूको साथ थोक ग्लिटर पानी सक्रिय मैजिक चिपकने Eyeliner
१, २ मा १ स्व-चिपकने तरल eyeliner कलम
२, वाटरप्रूफ र लामो समयसम्म चलिरहने
,, हाम्रो जादू eyeliner गलत कोर्रा चिपकनेको लागि हो
,, Adhesive प्रविधिको साथ नयाँ फार्मूला
तरल सेल्फ-चिपकने Eyeliner Pen
कालोसिल २ मा १ सेल्फ-चिपकने वाला लिक्विड आईलाइनर एक चिपकाउने टेक्नोलोजीको साथ एउटा नयाँ फार्मूला हो, सेल्फ-चिपकने, सुरक्षित र कोमल, तपाईंको आँखामा कुनै हानी छैन, राम्रो गन्ध, चिल्लो र प्राकृतिक, जलरोधक र पसिना प्रूफ, यो तपाईंको लागि उत्तम विकल्प हो। कोर्रा, तपाइँलाई एक अद्भुत अनुभव दिनुहोस्। हाम्रो Eyeliner दुबै लाश ग्लू र eyeliner हो, कोर्राको लागि बलियो पकड, तपाईं गोंद वा चुम्बकीय eyeliner को सट्टा हाम्रो जादू eyeliner साथ eyelashes लगाउन सक्नुहुन्छ।
पुनः प्रयोग योग्य र लागू गर्न सजिलो
करीव seconds० सेकेन्डको लागी बारस लगाउन सजिलो। तपाईंको समय बचत गर्नुहोस् र चरणहरू सरलीकृत गर्नुहोस्। गढीले तपाईंलाई चिह्नहरू बचाउने चिह्न र लाजबाट मुक्त गर्दछ। Eyelashes मा राख्न सरल3कदम र शुरुआतीहरूको लागि यति उपयुक्त! लाइनर हिलाउनुहोस्, त्यसपछि लाइनरलाई तपाईंको हानीपट्टी रेखा कर्लको साथ चित्र बनाउनुहोस्, अन्तमा कोर्रा लगाउनुहोस्। कुनै पनि झूटो कोर्रा संग प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Adhesive eyeliner कसरी लागू गर्ने?
१ Eyeliner चलाउनु अघि १०-२० पटक प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले।
२ आइलाइरर तपाईंको eyelashes को आधार संग रेखाचित्र।
3 तपाईंको चिम्टीको साथ eyelashes क्ल्याम्प।
,, आँखा क्षेत्रमा eyelashes प्रेस गर्नुहोस् र लगाउन समाप्त गर्नुहोस्।
बरौनी चिपकने eyeliner कसरी काम गर्दछ?
उत्पादनले चिपलेट (र पिग्मेन्ट, यदि तपाईं कालो प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ) को एक चिकनी र सटीक लाइन बिछ्याएर कार्य गर्दछ, जुन केहि सेकेन्ड पछि कठिन हुन्छ। कुनै पनि किसिमको झोला फ्याँकिन्छ त्यसपछि स्जड्-प्रूफ लाइन माथिको ठाउँमा राख्न सकिन्छ, जहाँ यो गोंद जस्तै राखिन्छ (तर हामी मध्ये जो प्राय जसो चुनौती दिन्छौं, कम गडबडी र टाँसिएको औंलाहरूले)।
कस्टम निजी लेबल आईलाइनर बक्सहरू
हामीसँग विभिन्न eyeliner प्याकेजिंग बक्सहरू, eyeliner केसहरू, आदि ठूला तयारी स्टकमा छन्। यसको सट्टामा, अनुकूलित निजी लेबल सेवा हाम्रो लागि उपलब्ध छ। सामान्यतया, तैयार स्टक बक्सहरू वा केसहरूको लागि हामी dd यूभी प्रिन्टि support समर्थन गर्दछौं, यदि तपाईंलाई बक्सहरूको आकार र आकार चाहिन्छ भने, यसलाई व्यक्तिगत पनि गर्न सकिन्छ। तपाईले के गर्नु पर्छ हामीलाई लोगो र तपाईले चाहानु भएको रंग पठाउनु हो। हामी निश्चित रूपमा तपाईको लागि उत्तम बरौनी प्याकेजिंग बनाउँदछौं।
अब अनुकूलन गर्नुहोस्
अघिल्लो: थोक सस्तो मूल्य निजी लेबल पट्टी Lashes 25mm मिंक बरौनी विक्रेता
अर्को: OEM २०२० लोकप्रिय लोकप्रिय आई लाइनर वाटरप्रूफ मैजिक तरल Eyeliner चिपकने वाला ग्लू पेन
Eyeliner गोंद कलम
Eyeliner निजी लेबल
पानी सक्रिय Eyeliner
प्रोफेशनल चिपकने वाला कालो Eyeliner वाटरप्रूफ ...
OEM निजी लेबल पानी सक्रिय तरल टिकट ...
२-इन -१ लागू गर्दै झूटा Lashes तरल Eyeliner पीआर ...
हीरा ब्ल्यांग ग्लिटर लिक्विड आईलीनर नो ग्लू, ...
सुपर मजबूत वाटरप्रूफ आईलाइनर निजी लेबल ...
आँखा ल्याश, बरौनी विस्तार, मिंक कोर्रा, आँखा लाइनर, बरौनी विक्रेताहरू, आईलाइनर,